Nice ibe! Site n'echiche ime mmụọ, ha na-akpọ usoro a edemede. Debanye na akụkụ ahụ ma ọ bụ akụkụ nke gị na-ebi / bi na akụkụ ndị ọzọ. Gị onwe gị, aha ọ bụla ị chọrọ inye ya. Ọ bụkwa ihe ncheta banyere onye ị bụ. E nwekwara ndị na-ehi ụra mgbe ha tetara. E nwekwara ndị nwere ike ikwu banyere ya n'ihi na ha chere na ha ghọtara ụfọdụ n'ime echiche ndị ahụ mana ha adịghị amụ anya n'eziokwu ha. Onye ọ bụla na-amụ anya na-aghọta / ahụ ya.
Ọ na-amasị m ka ị na-akọwa ya, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke ọzọ, ma ha abụọ bụ eziokwu. Ka m na-ahụ ya, ndị na-abụghị ndị na-eme ihe nkiri bụ akụkụ nke inyere ndị ọzọ aka na nbilite n'ọnwụ ha. Ọ dị nnọọ mma nke na ndị a na-abụghị ndị na-animated na-eme 'ihe ha'. (ruo mgbe edemede ya) Ha amaghịdị na ha so n'usoro ihe ka ukwuu. M onwe m na-eche na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị mmadụ nọ n'ụwa n'amaghị ama egwuregwu nke ha nọ. Ha na-arụ ọrụ ha (amaghị ihe ọ bụla). Ha nwere ike ibi ndụ dịka usoro ihe omume ahụ si dị. Ụwa a dị ka ọ kwesịrị ịbụ ma mee ihe ọ kwesịrị ime. Ọ dịghị ihe gbanwere. Ọ bụrụ na ị bịa na edemede ma ọ bụ na-enweta nke a, mgbe ahụ, ọ dị mkpa ka m weghachite njikọ ahụ na ezi gị onwe gị na ibi ndụ onye ị bụ n'ezie. Mgbe ahụ i nwekwara ike inyere ndị ọzọ aka na nbilite.
Ihe ime mmụọ na-akọwa ya n'ụzọ ụfọdụ, n'ihi na n'oge ahụ, nghọta dị na ụzụ adịghịrịrị na anyị na-ebi ndụ na nju. Enwere ike ịtụgharị uche ugbu a n'ụzọ nkịtị. Anyị na-ele anya na ahụ anyị (site na nke a avatar) / egwu dị na nmegharị a.
Nnwale nnwale abụọ ahụ na-egosi ya. Eluigwe na-arụkwa ọrụ dị ka koodu kọmputa. Anyị "na-ebi n'ime" usoro (Luciferian virus).
Nleta nile: 13.141.972
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ op Ihe omimi nke 'ezi obi ulo' PsyOp maka iwepu nnwere onwe gi niile na iwebata 'ndi uwe ojii chere' (akụkụ 2)
SandinG op Ihe omimi nke 'ezi obi ulo' PsyOp maka iwepu nnwere onwe gi niile na iwebata 'ndi uwe ojii chere' (akụkụ 2)
Martin Vrijland op Ihe omimi nke 'ezi obi ulo' PsyOp maka iwepu nnwere onwe gi niile na iwebata 'ndi uwe ojii chere' (akụkụ 2)
Tụlee op Ihe omimi nke 'ezi obi ulo' PsyOp maka iwepu nnwere onwe gi niile na iwebata 'ndi uwe ojii chere' (akụkụ 2)
Jikọọ ndị 1.656 ndị ọzọ debanyere aha